Didier Deschamps oo ka hadlay xaaladda Antoine Griezmann ee Kooxda Barcelona – Gool FM
Didier Deschamps oo ka hadlay xaaladda Antoine Griezmann ee Kooxda Barcelona
Dajiye November 10, 2020
(France) 10 Nof 2020. Tababaraha xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa halkiisa kasii waday inuu difaaco laacibka ay isku dalka Yihiin ee Antoine Griezmann, kaddib markii loo soo jeediyay dhaleeceyn, sababo la xiriira hoos u dhac ku yimid heerkiisa tan iyo markii uu yimid garoonka Camp Nou.
Didier Deschamps ayaa dhaliyay muran baahsan todobaadyo kahor kaddib markii uu si cad u sheegay in kooxda Barcelona aysan ka ciyaarsiinin Griezmann booskiisa saxda ahaa, hadalkan ayaana jecleysan tababare Ronald Koeman.
Deschamps ayaa ugu yeeray Antoine Griezmann liiska xiddigaha xulka qaranka France ee ka qeyb galaya kulammada soo aadan ay kula ciyaari doonaan xulalka Portugal iyo Sweden ee tartanka UEFA Nations League.
Haddaba Didier Deschamps ayaa sheegay in Antoine Griezmann uu kga jiro xaalad niyadjab ah kooxda Barcelona, ​​isagoo aan sharraxin sababaha arrintan ka dambeeysa, laakiin wax shaki ah kama muujin awooda uu laacibka u leeyahay inuu badelo xaaladiisa haatan ee naadiga reer Catalonia.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Didier Deschamps, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa:
“Antoine Griezmann xoogaa wuxuu ku niyadjabsan yahay waxyaabaha qaar, waana inuu wax ka beddelaa xaaladdiisa, laakiin shaki kama qabo waxa uu sameyn doono”.
“Markaan runta ka hadlo, marka ay ciyaartoydu maraan xaallad adag oo ka dhex jirta kooxahooda, waxay dareemi doonaan xoogaa niyadjab ah”.
Liverpool oo war naxdin leh heshay & kulammada uu seegayo Alexander-Arnold oo la sii ogaaday
Paris Saint-Germain oo ka hadashay wararka la xiriirinaya Cristiano Ronaldo